Taalibaan oo dalbanaysa in ay khudbad ka jeediyaan shirka Qaramada Midoobay - Bulsho News
Fahad Yaasiin: Afar arrimood oo uu sameyn karo ka dib...
Farmaajo: "Soomaaliya waxaa ka dhacaysa doorasho xor iyo xalaal ah"
Taalibaan oo dalbanaysa in ay khudbad ka jeediyaan shirka Qaramada Midoobay
Wasiirka arrimaha dibedda Taalibaan Amir Khan Muttaqi ayaa warqadda u qorey Qaramada Midoobay
Kooxda Taaliban ayaa weydiisatay inay khudbad ka jeediso shirka hogaamiyayaasha caalamka ee Qaramada Midoobay todobaadkan oo ka dhacaya magaalada New York.
Wasiirka arrimaha dibedda ee kooxda ayaa codsiga ku soo qoray warqad Isniintii shalay ahayd soo gaartay guddiga. Guddi ka socda Qaramada Midoobay ayaa go’aan ka gaari doona codsiga Taalibaan.
Taalibaan ayaa sidoo kale afhayeenkooda fadhigiisu yahay Doha Suhail Shaheen u magacaabay safiirka Afghanistan ee Qaramada Midoobay.
Kooxdan oo bishii hore la wareegtay gacan ku haynta Afgaanistaan ​​ayaa sheegtay in ergaygii xukuumaddii la afgambiyay uusan hadda matalin dalka.
Codsiga ka-qaybgalka doodda heerka sare ah waxaa tixgelinaya guddiga aqoonsiga, oo sagaal xubnood ay ka mid yihiin Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka, sida uu sheegay afhayeenka Qaramada Midoobay.
Laakiin waxay u badan tahay inaysan kulmin kahor dhammaadka kalfadhiga Golaha Guud ee Isniinta soo socota. Ilaa waqtigaas, sida uu dhigayo sharciga Qaramada Midoobay, Ghulam Isaczai wuxuu sii ahaan doonaa safiirka Afghanistan ee hay’adda caalamiga ah.
Waxaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo maalinta ugu dambeysa ee kulanka 27-ka Sebtember. Si kastaba ha ahaatee Taalibaan ayaa sheegtay in hadafkiisu “uusan hadda mataleyn Afghanistan”.
Waxa ay sidoo kale sheegeen in dhowr dal aysan u aqoonsaneyn madaxweynihii hore Ashraf Ghani hoggaamiyaha Afghansitan
Mr Ghani ayaa si lama filaan ah uga baxay Afgaanistaan ​​iyadoo mintidiinta Taliban ay ku sii siqayeen caasimadda Kabul 15-kii Ogosto. Tan iyo markaas wuxuu magangelyo ka helay Imaaraadka Carabta.
Pakistan’s prime minster suggests that women can “assert their rights” in Afghanistan
Markii ugu dambaysay ee ay Talibanka maamulaan Afgaanistaan, intii u dhaxaysay 1996 iyo 2001, safiirkii dawladdii ay afgembiyeen ayaa sii ahaa wakiika Qaramada Midoobay , ka dib markii guddiga aqoonsiga dib u dhigay go’aankiisii ​​ku aaddanaa sheegashada jagadaasi.
Kulankii Qaramada Midoobay ee Talaadadii, Qadar waxay ku boorrisay hoggaamiyeyaasha adduunka inay sii wadaan la shaqaynta Taliban.
Qaadacaadda iyaga waxay u horseedi doontaa oo keliya is -afgarad iyo falcelin, halka wada -hadalku uu noqon karo mid miro -dhal ah, “ayuu yiri hoggaamiyaha Qadar, Sheekh Tamim bin Xamad Al Thani.
Qadar waxay noqotay dillaal muhiim u ah Afgaanistaan. Waxay martigelisay wadahadii u dhexeeyay Taalibaan iyo Mareykanka kaas oo ku dhammaaday heshiiskii 2020 ee ahaa in ciidamada Nato ee uu hoggaaminayo Mareykanka ka baxaan Afghanistan.
by Bulsho Media 9 seconds ago 9 seconds ago
by Bulsho Media 21 seconds ago 21 seconds ago
by Bulsho Media 27 seconds ago 27 seconds ago
Myanmar military says it will release 5,600 anti-coup prisoners
by Bulsho Media 37 seconds ago 37 seconds ago
by Bulsho Media 47 seconds ago 47 seconds ago
by Bulsho Media 50 seconds ago 50 seconds ago
Wiil uu dhalay Qadaafi oo laga sii daayay...
N Korea says it fired anti-aircraft missile, 4th...
Ruushka oo tijaabiyey Gantaal cusub oo nooca Nukliyeerka...
Warbixin: Xaaladaha Siyaasadeed ee Ka Dhextaagan Xisbiyada Kulmiye...
Doorashadii Aqalka Sare ee HirShabeelle oo maanta baaqatay...
Barcelona Oo Ka Hadashay Wararkan Sheegaya In Uu...
Ex-Nazi concentration camp secretary, 96, caught after fleeing...